China Yellow Green Wire 4mm 6mm yethusi Solar Grounding Earth Cable ifektri kanye nabaphakeli | UBUNGOZI
Ikhebula Eliphuzi Eliphuzi 4mm 6mm Ithusi Elisisekelo Likagesi Lomhlaba
Ikhebula le-Yellow Green 4mm 6mm le-Copper Solar Grounding Earth lisetshenziswa kuma-solar panels wokukhiqizwa kwamandla nezinye izinto ezihlobene nokuxhunywa kwezintambo, ikakhulukazi okufanelekela ngaphandle.Ukuphikiswa yilanga, ukulwa nokuguga, Kusetshenziswa izinto ezishunqayo zomlilo ezingenalutho ezisebenza ngomlilo, ibanga eliphakeme, ukuphepha okwengeziwe.
Usayizi odumile: 2.5mm, 4mm, 6mm
Ubude obudumile: 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm
Amandla alinganisiwe: 450V / 750V AC
Umqhubi: Stranded Bare Copper
Umbala: Okuphuzi / Okuhlaza
Ukusetshenziswa kwe-BVR Solar Grounding Cable
Ikhebula le-BVR Solar Grounding Cable, elenziwe ngophawu lwe-PVC lolo chungechunge lwezintambo zokubeka, ezilungele kakhulu ukubeka ezindaweni ezihleliwe. Ikhebula le-Earth Grounding lisetshenziswa kakhulu njengezixhumi zesistimu elanga, ukushayela, ukukhanyisa, izixhobo zikagesi, izinsimbi zensimbi kanye nezokuxhumana ngocingo olunamandla alinganisiwe afika ku-450 / 750V (UO / U). Ingxenye yezintambo zepulasitiki zisetshenziswa kwimishini ene-AC elinganisiwe yamandla afinyelela ku-300V.
Imininingwane Yezobuchwepheshe ye-BVR Solar Grounding Cable
Usayizi wekhebula Ububanzi beHole Ubude Iphakheji
2.5mm2 5mm (4/6 / 8mm ngokuzithandela) 100mm / 120mm / 150mm / 200mm / 250mm / 300mm(Noma obunye ubude obenziwe ngezifiso) 100pcs / isikhwama
Ukwenza ngokwezifiso ukusekelwa okuhlukahlukene kusekelwa.
· Isipiliyoni seminyaka eyi-12 embonini yelanga nasekuhwebeni
Langaphambilini Ikhebula le-50A 600V Andersons Power Connector Adapter
Olandelayo: Ikhebula le-Auto Wire Car Extender Isixhumi 2 Pin SAE Battery Cable
Izintambo ezingama-750V AC
Ikhebula lokuqinisa i-AC
ikhebula lomhlaba elanga
iphaneli yelanga umhlaba
uhlelo lwelanga lokugaya